မူဆယ်တွင် ဆိုက်ကယ်ရပ်သည့်နေရာနယ်နိမိတ်ကျော်သည့်ကိစ္စ တရုတ်နယ်ခြားစောင့်ရဲမှ လာရောက်ပြောဆို...! - Thadin
HomeNEWSမူဆယ်တွင် ဆိုက်ကယ်ရပ်သည့်နေရာနယ်နိမိတ်ကျော်သည့်ကိစ္စ တရုတ်နယ်ခြားစောင့်ရဲမှ လာရောက်ပြောဆို…!
March 15, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on မူဆယ်တွင် ဆိုက်ကယ်ရပ်သည့်နေရာနယ်နိမိတ်ကျော်သည့်ကိစ္စ တရုတ်နယ်ခြားစောင့်ရဲမှ လာရောက်ပြောဆို…!
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကလည်း တရုတ် – မြန်မာ နယ်စပ် မြို့ဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပန်းဆိုင်(ကြူကုတ်)မြို့နယ်၊ ဖိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာ နယ်မြေအငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်ခဲ့သည်။
ဓာတ်ပုံ – ဗီအာတီ (ဧရာဝတီတိုင်းမ်)
၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလကလညျး တရုတျ – မွနျမာ နယျစပျ မွို့ဖွဈတဲ့ ရှမျးပွညျနယျ၊ ပနျးဆိုငျ(ကွူကုတျ)မွို့နယျ၊ ဖိုးကောငျး ကြေးရှာအုပျစုအတှငျးမှာ နယျမွအေငွငျးပှားမှုတှဖွေဈခဲ့သညျ။
ဓာတျပုံ – ဗီအာတီ (ဧရာဝတီတိုငျးမျ)
This Month : 37654
This Year : 233052
Total Users : 592076
Total views : 2717493